Semalt: Ahoana no hanakanana Spam referrer - Torohevitra mandresy lahatra
Ny fitantanana bilaogy iray na tranokala e-commerce dia traikefa mampanentana sy mahafa-po izay manome karazana fahafaha-manatsara ny orinasa ary mamorona fahafaha-manao. Na dia izany aza, maro ireo adiady miezaka ny manimba ny orinasa an-tserasera ary mamorona sakana ho an'ny rehetra tsy misy antony manokana. Te-hanao zavatra mihoatra noho ny famoronana korontana izy ireo ary ny mpitsidika dia iray amin'ireo. Azo antoka ny filazàna fa ireo mpitsikilo sy mpitsikilo ireo dia mpanakanto graffiti ao amin'ny aterineto izay miezaka foana ny mamela ireo marika tsy an-kiato amin'ny aterineto - tech companies in portland, oregon.
Raha mandinika ny kaonty Google Analytics ianao ary mahita ny fitomboan'ny mpitsidika avy amin'ireo tranonkala tsy fantatra, dia misy ny vintana izay nokendrenao ny tranonkala, ary mila mandray fepetra faran'izay haingana ianao. Ireo tranonkala izay mandefa spam referral dia hulfingtonpost.com, priceg.com cenoval.ru, ary bestwebsitesawards.com. Mety ho hafahafa izany, saingy ny ankamaroan'ny mpikarakara webmasters sy ny mpitoraka blaogy dia tsy manana hevitra fa ny tranonkala dia mahazo fahitana sandoka, ny ankamaroan'izy ireo dia avy amin'ireo tranonkala vao voalaza etsy ambony.
Soa ihany, Max Bell, mpitantana ny Success Successor Semalt , dia manome fomba sasantsasany hanakanana ireo tranonkala sy hampiato ny fifamoivoizana amin'ny fanelingelenana ny orinasanao amin'ny aterineto.
Ampiasao ny rakitra .htaccess mba hiadiana amin'ny mpampiasa spam
Raha hampiantrano amin'ny tranonkala Apache ny tranokalanao, dia mila manavao ny..htaccess file. Ny fomba tsara indrindra dia ny manakana ny rakitra .htaccess mba hanafoanana spammers sy bota ratsy. Azonao atao koa ny manova azy ireo amin'ny Apache izay mety tsy ho mora ho azy ireo ny maminavina.
Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia tsy hitsidika ny tranonkalanao ireo spamers sy ny bots. Amin'ny toe-javatra toy izany, tokony hanakana ireo bots ireo ianao ary haka azy ireo amin'ny tranonkalany manokana amin'ny fampidirana ireo kaody manokana ao amin'ny kaonty Google Analytics. Azonao atao ihany koa ny mamorona sivana ao amin'ny pejinao Google Analytics, ary hanampy anao hanatsara ny kalitao amin'ny fifamoivoizana. Soa ihany, Google Analytics dia manolotra fanampim-panazavàna maro hanesorana ireo spammers amin'ny tahiry sy ny tatitra momba ny analytics. Ny hany tokana amin'ity fomba fitsaboana ity dia tsy ho ampiharina amin'ny tranokala rehetra ihany izany.
Fandrindrana fanoratana Botika amin'ny anaranao
Azonao atao ny manitsy ny sivana amin'ny bot. Noho izany, tokony handeha amin'ny kaonty Google Analytics ianao ary mamorona ny Filtres vaovao. Safidio ny safidy Custom ary ampidiro ny code manokana ao anatin'izany.
Blocking Referrer Spam Adiresy IP
Azonao atao ny manakana ny adiresy IP manokana amin'ny adiresy IP. Tiako ny dingana amin'ny fanakanana ny fifamoivoizana avy amin'ireo IP tsy fantatra anarana. Tokony ho azonao antoka fa tsy halefa amin'ny tranonkalanao ny fidirana amin'ny solosaina amin'ny alalan'io fanao io.
Lisitry ny lisitry ny fanavahana ny Google Analytics
Ny dingana manaraka dia ny hahazoana antoka fa voavonjy ny lisitry ny lisitry ny lisitra Google Analytics IP. Zava-dehibe ny mitadidy fa tsy afaka mankafy ny vokatra tsara indrindra ianao raha tsy efa nisintona ity lisitra ity. Ny Google Analytics dia manolotra safidy maromaro hanaisotra ny lisitra ary hanakana ny adiresy IP. Azonao atao ny misafidy sy manamboatra plugin ao amin'ny tranokalanao, mba hiarovana sy hiarovana azy manontolo.